မာမီတိုင်းရဲ့ လက်သုံးစကားကြီး (၅)ခွန်း -
Posted on January 11, 2019 Author Christina Rosy	Comment(0)
မရှိဘူး.. မရှိဘူး… ဒီစကားတွေ မကြားဖူးတဲ့ ယောင်း ရှိကို မရှိဘူး 😛
သားအမိကြား ဆက်ဆံရေးက မြန်မာကားတွေထဲကလို ကြင်ကြင်နာနာယုယုယယဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ မယုံရင် အတန်းတွေလစ်၊ အလုပ်တွေပစ်ပြီး တစ်ရက်လောက်ပဲ အိမ်ထဲအောင်းကြည့်။ အနည်းဆုံး တစ်ခါလောက်တော့ အဆူခံမထိရင် ယောင်းတော့ဂြိုဟ်သူမပဲ။ အမေတွေက ရုပ်ရှည်အသွင်အပြင်ဘာညာသာ အချင်းချင်း မတူကြတာ။ ဆူလိုက်ပြောလိုက်ရင် သုံးတဲ့စကားတွေကတော့ တစ်ထပ်တည်းရယ်။ မာမီအသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ ထင်ရှားတဲ့ လက်စွဲသုံးစကားတွေကတော့…
၁။ အဲ့ဒီ ဖုန်းပဲ တစ်ချိန်လုံး ပွတ်နေတာကိုး။
အခုလို အိုင်တီခေတ်မှာ ဒီစကားမျိုးမပြောဖူးတဲ့ မာမီမားသားက ခေတ်နောက်ကျတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်နော်။ ဒီနေ့ ကိုယ်ဖုန်းသုံးတာများနေပြီဆို သတိနဲ့နေပါ။ ယောင်ယမ်းပြီး ခေါင်းကိုက်တယ်၊ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်တယ် ဘာညာသွားမပြောလိုက်နဲ့။ “အေး…နင် အဲ့ဖုန်းပဲ ပွတ်နေတာကိုး” ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပစ်ပေါက်ခံရမယ်မှတ်။ တစ်ရာ့ကိုးတစ်ရာ့တစ်ဆယ် အက်ဒမင်ဆို အာ့အထာတွေ နပ်နေပြီ။
၂။ ငါရှာပြီးတွေ့လို့ကတော့ နာပြီမှတ်။
ဒိုင်နမိုရဲ့ မျက်လှည့်ကွက်တွေလောက်တော့ မာမီတွေ သနားသေး။ ကိုယ်ဘယ်ရှုထောင့်ကရှာရှာ ရှာမတွေ့တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးကို မာမီမားသားတွေ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရှာတွေ့နိုင်တာ နည်းတဲ့စကေးလား။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်မတွေ့တဲ့ ပစ္စည်းက ဘယ်လောက်ပဲ အရေးကြီးနေပါစေ၊ ကိုယ့်အမေလာရှာရင် မတွေ့ပါစေနဲ့လို့တောင် ကြိတ်ဆုတောင်းရတဲ့အဖြစ်။ မဟုတ်ရင်တော့ နားထဲ ဂွမ်းဆို့ထားတော့။
Related Article >>> ယောင်းအမေရဲ့ ကျန်းမာရေးက ယောင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်လား?
၃။ နင့်အဖေ အချိုးတွေ မချိုးနဲ့။
အဖေနဲ့အမေကြား စစ်တွေဘာတွေဖြစ်ထားရင် သတိထား၊ ငြိမ်ငြိမ်လေးသာနေ။ အချိုးမပြေတာတစ်ခုခုများ ယောင်ယမ်းပြီးလုပ်ကြည့်။ ကိုယ့်ကိုဆူသလိုလို၊ သူ့ခင်ပွန်းကိုဆူသလိုလိုနဲ့ “နင်အဖေအချိုးတွေ မချိုးနဲ့”ဆိုပြီး တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်အကွက်တွေ နင်းလိမ့်မယ်။ အဟွင်း.. အံခွနေပြီ…
၄။ အားကို မကိုးရဘူး။
ကိုယ့်မှာ အားလပ်ရက်ဆို နာမည်ကောင်းများ ရမလားဆိုပြီး တတ်နိုင်သလောက်လေး တံမြက်လှည်း၊ အဝတ်လျှော်၊ မီးပူတိုက် ဘာညာ ကူညီနေတုန်းကတော့ မာမီတွေ ပြုံးနေနိုင်သေး။ ဧည့်သည်တစ်ယောက်ယောက်ကများ “နင်ပိန်သွားတာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးမပြောလိုက်နဲ့။ “အမလေး၊ ဒီအိမ်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မနက်မိုးလင်းကတည်းကနေ ညမိုးချုပ်ထိ လုပ်ရတာကိုး။”
အဲ့ဒီအချိန်များ အလိုက်မသိတဲ့ ရွှေဧည့်သည်တော်က “နင့်သမီးကို ကူခိုင်းပေါ့” လို့ မီးလေးမွှေးပေးလိုက်ရင် ဇာတ်သိမ်းဖို့လွယ်သွားပြီ။ “အားကို မကိုးရဘူး”ဆိုတဲ့ တံဆိပ်လေး ကိုယ့်နဖူးပေါ် အော်တိုရောက်လို့။
Related Article >>> စမတ်ကျကျ ယောက္ခမ အပိုင်ချုပ်နည်း (၇)မျိုး
၅။ ငါအမေလား နင်အမေလား။
အမေက ဒါဆို ဒါလိုက်၊ ဟိုဟာဆို ဟိုဟာလိုက်။ လျှာကလေးရှည်ပြီး ဒါက ဟိုဟာပါ၊ ဟိုဟာက ဒါပါဆိုပြီး အထွန့်လိုက်တက်ရင်တော့ “ငါအမေလား နင်အမေလား”ဆိုပြီး ပါးစပ်ကလေးကို ဖူးလ်စတော့ ချပေးလိုက်မှာပါ။
လွယ်တော့မလွယ်ဘူးယောင်းရေ။ တိုက်ဆိုင်လို့များ ဒီပို့စ်ကိုရှယ်မယ်ဆိုရင်တော့ မာမီမားသားကို Except လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ မဟုတ်ရင် မာလကီးယားသွားမယ်။ တခြား လက်စွဲသုံးစကားကြီးတွေရှိရင်လည်း မန့်ထဲမှာ မျှဝေပေးကြဦးနော် 😛
မရှိဘူး.. မရှိဘူး… ဒီစကားတှေ မကွားဖူးတဲ့ ယောငျး ရှိကို မရှိဘူး 😛
သားအမိကွား ဆကျဆံရေးက မွနျမာကားတှထေဲကလို ကွငျကွငျနာနာယုယုယယဆကျဆံရေးမြိုးမဟုတျဘူးနျော။ မယုံရငျ အတနျးတှလေဈ၊ အလုပျတှပေဈပွီး တဈရကျလောကျပဲ အိမျထဲအောငျးကွညျ့။ အနညျးဆုံး တဈခါလောကျတော့ အဆူခံမထိရငျ ယောငျးတော့ဂွိုဟျသူမပဲ။ အမတှေကေ ရုပျရှညျအသှငျအပွငျဘာညာသာ အခငျြးခငျြး မတူကွတာ။ ဆူလိုကျပွောလိုကျရငျ သုံးတဲ့စကားတှကေတော့ တဈထပျတညျးရယျ။ မာမီအသိုငျးအဝိုငျးကွားမှာ ထငျရှားတဲ့ လကျစှဲသုံးစကားတှကေတော့…
၁။ အဲ့ဒီ ဖုနျးပဲ တဈခြိနျလုံး ပှတျနတောကိုး။
အခုလို အိုငျတီခတျေမှာ ဒီစကားမြိုးမပွောဖူးတဲ့ မာမီမားသားက ခတျေနောကျကတြယျလို့တောငျ ပွောလို့ရတယျနျော။ ဒီနေ့ ကိုယျဖုနျးသုံးတာမြားနပွေီဆို သတိနဲ့နပေါ။ ယောငျယမျးပွီး ခေါငျးကိုကျတယျ၊ တဈမြိုးကွီးဖွဈတယျ ဘာညာသှားမပွောလိုကျနဲ့။ “အေး…နငျ အဲ့ဖုနျးပဲ ပှတျနတောကိုး” ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပဈပေါကျခံရမယျမှတျ။ တဈရာ့ကိုးတဈရာ့တဈဆယျ အကျဒမငျဆို အာ့အထာတှေ နပျနပွေီ။
၂။ ငါရှာပွီးတှလေို့ကတော့ နာပွီမှတျ။
ဒိုငျနမိုရဲ့ မကျြလှညျ့ကှကျတှလေောကျတော့ မာမီတှေ သနားသေး။ ကိုယျဘယျရှုထောငျ့ကရှာရှာ ရှာမတှတေဲ့ ပစ်စညျးမြိုးကို မာမီမားသားတှေ စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး ရှာတှနေို့ငျတာ နညျးတဲ့စကေးလား။ တဈခါတလေ ကိုယျမတှတေဲ့ ပစ်စညျးက ဘယျလောကျပဲ အရေးကွီးနပေါစေ၊ ကိုယျ့အမလောရှာရငျ မတှပေ့ါစနေဲ့လို့တောငျ ကွိတျဆုတောငျးရတဲ့အဖွဈ။ မဟုတျရငျတော့ နားထဲ ဂှမျးဆို့ထားတော့။
Related Article >>> ယောငျးအမရေဲ့ ကနျြးမာရေးက ယောငျးရဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ဆကျစပျမှုရှိတယျဆိုတာ တကယျလား?
၃။ နငျ့အဖေ အခြိုးတှေ မခြိုးနဲ့။
အဖနေဲ့အမကွေား စဈတှဘောတှဖွေဈထားရငျ သတိထား၊ ငွိမျငွိမျလေးသာနေ။ အခြိုးမပွတောတဈခုခုမြား ယောငျယမျးပွီးလုပျကွညျ့။ ကိုယျ့ကိုဆူသလိုလို၊ သူ့ခငျပှနျးကိုဆူသလိုလိုနဲ့ “နငျအဖအေခြိုးတှေ မခြိုးနဲ့”ဆိုပွီး တဈခကျြခုတျနှဈခကျြပွတျအကှကျတှေ နငျးလိမျ့မယျ။ အဟှငျး.. အံခှနပွေီ…
ကိုယျ့မှာ အားလပျရကျဆို နာမညျကောငျးမြား ရမလားဆိုပွီး တတျနိုငျသလောကျလေး တံမွကျလှညျး၊ အဝတျလြှျော၊ မီးပူတိုကျ ဘာညာ ကူညီနတေုနျးကတော့ မာမီတှေ ပွုံးနနေိုငျသေး။ ဧညျ့သညျတဈယောကျယောကျကမြား “နငျပိနျသှားတာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားမြိုးမပွောလိုကျနဲ့။ “အမလေး၊ ဒီအိမျမှာ ကိုယျတဈယောကျတညျး မနကျမိုးလငျးကတညျးကနေ ညမိုးခြုပျထိ လုပျရတာကိုး။”
အဲ့ဒီအခြိနျမြား အလိုကျမသိတဲ့ ရှဧေညျ့သညျတျောက “နငျ့သမီးကို ကူခိုငျးပေါ့” လို့ မီးလေးမှေးပေးလိုကျရငျ ဇာတျသိမျးဖို့လှယျသှားပွီ။ “အားကို မကိုးရဘူး”ဆိုတဲ့ တံဆိပျလေး ကိုယျ့နဖူးပျေါ အျောတိုရောကျလို့။
Related Article >>> စမတျကကြ ယောက်ခမ အပိုငျခြုပျနညျး (၇)မြိုး
၅။ ငါအမလေား နငျအမလေား။
အမကေ ဒါဆို ဒါလိုကျ၊ ဟိုဟာဆို ဟိုဟာလိုကျ။ လြှာကလေးရှညျပွီး ဒါက ဟိုဟာပါ၊ ဟိုဟာက ဒါပါဆိုပွီး အထှနျ့လိုကျတကျရငျတော့ “ငါအမလေား နငျအမလေား”ဆိုပွီး ပါးစပျကလေးကို ဖူးလျစတော့ ခပြေးလိုကျမှာပါ။
လှယျတော့မလှယျဘူးယောငျးရေ။ တိုကျဆိုငျလို့မြား ဒီပို့ဈကိုရှယျမယျဆိုရငျတော့ မာမီမားသားကို Except လုပျဖို့မမနေဲ့နျော။ မဟုတျရငျ မာလကီးယားသှားမယျ။ တခွား လကျစှဲသုံးစကားကွီးတှရှေိရငျလညျး မနျ့ထဲမှာ မြှဝပေေးကွဦးနျော 😛
Tagged daughter, Favorite, Five, Fun, mother, quote, Speech
Posted on November 17, 2017 November 18, 2017 Author For Her Myanmar
ဒီယောင်းယောင်းတွေကတော့ သရဲကို ဒီလိုအခြောက်ခံရဖူးပါတယ်တဲ့.. ကျန်တဲ့ ယောင်းယောင်းတွေရော ?
Posted on October 31, 2017 Author Rin
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကမ်းခြေသွားဖို့  အစီအစဉ်ရှိရင်…
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ယောင်းတို့ ဘယ်လောက်သိလဲ?
Posted on May 3, 2018 July 25, 2018 Author Wathun
ဖြေကြည့်ပါ.. မြန်မာမှန်ရင်ပေါ့… 😛